galmudugnews.com » Maxkamadda Holland oo Dahabshiil lacag ku ganaaxday halkii ay ka sugeysay ?+Dukumiinti. Home Contact US
Home » WARARKA » Maxkamadda Holland oo Dahabshiil lacag ku ganaaxday halkii ay ka sugeysay ?+Dukumiinti. Maxkamadda Holland oo Dahabshiil lacag ku ganaaxday halkii ay ka sugeysay ?+Dukumiinti. admin on
Nov 30th, 2012 //
No Comment Views 163515Galmudugnews.com – Maxkamada Magaaladda Breda ayaa markii labaad lacag fara badan ku ganaaxday Shirkadda Dahabshiil oo dacwad ku oogtay Dahir Alasow.
Qoraal ka soo baxay Maxkamadda 29 November 2012 ayaa lagu laalay dhamaan dacwadii Shirkadda Dahabshiil ku oogtay Dahir Alasow oo metelayay Associated Somali Journalists ASOJ,Waagacusub iyo Sunatimes.
Dahabshiil waxay Maxkamadda ku xukuntay inay bixiso lacagta xeerbeegtida iyo tan Lawyer-ka halkii ay ka sugeeysay in Maxkamada xukunto Dahir Alasow.
Dahabshiil waxaa lacagta loogu ganaaxay inay Dacwada furatay oo Xeerbeegtida iyo Lawyerada waqtigooda ku lumisay kiis ay ku guuldareeysatay .
“Dahir Alasow wuxuu ku andacoonayaa in qoraaladiisa yihiin kuwa saxa sidaas darteed Maxkamada kuma qasbi karto inuu Website-yadiisa ka saaro Warbixinta Dahabshiil ka so dacwootay” ayaa lagu yiri Qoraal ka soo baxay Maxkamadda.
Go”aanka Maxkamada soo saartay ayaa ka dhigan guuldaradii labaad ee Shirkadda Dahabshiil ku habsata,waxayna kiiska dacwadaan ku khasaartay lacag ka badan afar Milyan oo Euro halka dacwadaan cusub lacagta uga baxday ay kor u dhaaftay hal Milyan oo Pound”
Inta badan Somalida ku nool Magaalada Breda ee Gobolka Brabant ayaa Mashxarad iyo dabaaldeg isugu soo baxay markii ay Warbaahinta ka arkeen in Maxkamada Ganaaxday Shirkadda Dahabshiil halka Kiiskii hore ee 8 Febraury 2010 ay Jaaliyada ka aamuseen.
Dabaaldega Somalida Breda sameeysay ayaa sawir ka bixinaya shacbiyada sii kordheysa ee Dahir Alasow taas oo laga dareemay maalintii Maxkamada furantay oo taageerayaashiisa buux dhaafiyeen hoolka dacwada ka socotay.
Waxaa laga yaabaa in Maamulka Dahabshiil wax badan kala socon sumcad xumida ay kala kulmi karaan labada guuldaro ee Maxkamad ku taal Yurub ku laashay dacwadooda.
“Maamulka Dahabshiil waxaa la gudboon inay xaqiiqsadaan in Madaxbanaanida Saxaafadu tahay lama taabtaan” ayuu yiri Dahir Alasow
“Associated Somali Journalsts waxay Hambalyo iyo Mahadcelin u direeysaa Qareenadda u doodayay madaxbanaanida Saxaafadda kuwaas oo kala ah ,Margriet Koedoder iyo Frouke Hekker” ayaa lagu yiri Warsaxaafadeed ka soo baxay Xafiiska ASOJ ee Muqdisho.
Associated Somali Journalists ASOJ waxay hambalyo gaara u dirayaan dhamaan Wariyeyaasha Soomaaliyeed gaar ahaan Wariyeyaashii ka qeyb qaatay kiiska Maxkamadda sida Halbeegnews.net ,Qurbejoog.com,Galmudugnews.com,Khaatuma.com iyo Boocame.com.
“Guusha laga gaaray Xulufadda Dhiigshiil maaha mid Dahir Alasow u gaara ee waa guul u soo hoyatay dhamaan Saxaafadda Madaxabanaan ee dunida,waxaana muhiima in Xoriyada loo dagaalamo si dhiig miiratada arxanka daran loo tuso in lacagtooda uu sharciga ka sareeyo” ayaa lagu yiri Warsaxaafadeedka ASOJ.
Halkaan ka akhri Ganaaxii lacageed ee lagu ganaacay Dahabshiil.
Popular post by viewFanaanada Falis Cabdi oo Film Sexy looga duubay Jig jiga . - 139423 hitsHalkaan Dhageyso Madaxweynaha Somalia oo Faroole meel saaray - 31881 hitsContact US - 30575 hitsDaawo haweeney Muqdisho ka furatay Guri lagu tunto - Fadeexo - 26141 hitsDaawo Video Dahir Alasow oo abtirsaday maxaase u galay Dhulbahante iyo Samaroon - 25637 hitsTopnews:-Wiil uu dhalay Ganacsade Xaaf oo falkii ugu xumaa ku sameeyay Gabar Maskiina +Sawiro? - 25259 hitsThis report no more in Galmudugnews - 23898 hitsXiriirka ka dhaxeeya burburka qoysaska & kacsi la'aanta - 23031 hitsHalkaan ka Daawo Video Xasan Dahir Aweys oo la dejiyay guri burcad badeeda ka dhisteen Cadaado iyo Ciidamada ilaaladiisa - 22364 hitsXaqiiq Cadeyn Wadata : Kismaayo, Daarood iyo Hawiye yaa dadka deegaanka ah?Faallo Xog iyo xaqiiqo warran ah - 22344 hitsDukumiinti sira: Akhri Liiska Lacagta Madaxda Dowladda KMG u taal Dahabshiil +Cadadka iyo faahfaahintooda - 21446 hitsLaundring of dollar black Money surges the price of Somaliland shillings - 21114 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo iyo Madaxtooyada oo noqotay Dance Club - 21107 hitsRag ka dhashay Qabiil yar oo bilaabay hab dhaqankii Gaalgalaha 1988-1990 ! - 20804 hitsDaawo Faysal Cali Warabe oo Wariye amakaag ku riday - 19870 hitsDaawo gabadh u dhalatay beesha Daarood oo si qatara u hadashay - 19864 hitsReal Madrid oo wiilka baabuuniska laga badshey ee Gareth Bale looga diiday 40.milan Euro. - 19248 hitsVOA-Idaajaa iyo Qabyaaladeynta Suugaanta - 18498 hitsDaawo Video Mohamed Kaahin oo dagaalyahanada Garxajis qabteen iyo Siilaanyo oo Habaryoonis u hanjabay - 17806 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 17723 hitsTopnews:- Dagaalka Farmaajo iyo Ibbi oo Weji qabiil yeeshay. - 17677 hitsDaawo Video jabka Al-Shabaab ee Beledweyne - 16903 hitsIla qosol Daawo Faroole maxaa ku dhacay - 16816 hitsDaawo qabyaaladii Reer Puntland oo noqotay dawada Hawiye - 15535 hitsSheekha ugu weyn Wahaabiyada Daarood oo ku baaqay in cafis la weydiisto Ahlusuna - 15471 hits Home Contact US